यो अद्भुत चक्कु हालने
चक्कु फाल्ने हाम्रो लागि सामान्य वस्तुहरू सानो समानता। तिनीहरूलाई तपाईं फेला हुनेछ आरामदायक ह्यान्डल र ब्लेड लगभग ENCHANTED। तर एक चक्कु जस्तै लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यसको आकार र ब्लेड को उच्च शक्ति, लक्षित गर्न टाँसिएको द्वारा भनेर, यो क्षतिग्रस्त छैन। अक्सर distinguishes र thickened स्टील, विशेष गरी एक ठोस यो टिप देखि केही सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। यसले यो ठाउँमा रूख मा प्रवेश भने यस कारण लागि ब्रेक गर्न प्रतिक्रिया छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ, अक्सर सरल चक्कु बिग्रनु। डिजाइन हालने चक्कु लगभग केहि हुन सक्छ, तर सामान्य मा, डिजाइन राम्ररी सन्तुलित र पूर्ण समतल हुनु पर्छ। सन्तुलन पनि ब्लेड उडान मा घुमाउन अनुमति छैन, र ठीक हावा प्रतिरोध कम गर्न फारम जाली। एक उच्च गुणस्तरीय चक्कु हालने 50 भन्दा बढी वर्ष पछिल्लो हुनेछ, यो तोड्न वा मोड्नु गर्न असम्भव छ। प्रायजसो, घाँसका पातहरू स्टेनलेस स्टील बनेको छन्। तथापि, सायद कसैले मानक वजन र विनिर्माण सामाग्री फरक जो दमास्कस इस्पात को चक्कु, वा अन्य मोडेल, फेंक रुचि।
चक्कु फालिएको सुविधाहरू
खतरनाक खिलौने को एक सुन्दर उडान गर्न गोप्य? Throwers, यस्तो खेल पेशेवर रूख खडा को लक्ष्य रूपमा प्रयोग मा संलग्न छन्, पानी प्रि-moistened। यो टिप बिस्तारै लक्षित पियर्स अनुमति दिन्छ। हालने को सबै भन्दा साधारण प्रविधी: आधा-पालो वा कुनै कारोबार मा ब्लेड परिक्रमा एक प्रविधी। पहिलो 3-5 मिटर दूरी मा प्रयोग। शरीर गति को recourse लहर बिना प्रयोग ब्लेड फाल्ने गरिएको छ। को स्विंग एक ब्रश वा प्रयोग गर्दा, गर्न सक्नुहुन्छ हावा मा एक ब्लेड सुरु अंधाधुंध घुमाउन र लक्षित पछिल्लो प्राप्त गर्न। यो पनि यसलाई आफ्नो हातको हत्केलामा देखि जारी गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो। सम्झिन र औंठी अर्को उपयोगी नियम: को लक्ष्य नजिक, गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र गर्न नजिक भएको छुरा राख्न। अधिकतम दूरी तपाईं एक हालने चक्कु फेंक गर्न सक्छन् जो देखि - 12 मीटर। तपाईं लक्षित थप टाढा सार्नुभयो भने, सफल हिट को प्रतिशत धेरै पटक द्वारा कम हुनेछ।
सबै भन्दा साधारण मोडेल
"Sturgeon" चक्कु। यो मोडेल आविष्कार र प्रसिद्ध वी गलैँचा विकास भएको थियो। ब्लेड मोटाइ -6मिमी। यो हालने चक्कु उपकरण लागि उपयुक्त छ "हातमा।" आधार सामाग्री प्रयोग स्टेनलेस रूपमा इस्पात प्रकार 30HGSM।
"नेता" चक्कु। यो ब्लेड यो गुरुत्वाकर्षण को एक गैर मानक केन्द्र छ भएकोले ह्यान्डल पकड गर्न सजिलो छ - उहाँले किनारा गर्न अगाडि सारिएको थियो। यो अक्सर हालने विभिन्न प्रविधी, "परिसंचरण मा" फेंक लागि उपयुक्त सिकाउन प्रयोग र लहर प्रविधी लागि हो।
चक्कु "Skanf" एक लहर हालने प्रविधी स्वामित्व गर्नेहरूलाई अपील गर्नेछ। को recesses र चक्कु को ह्यान्डल मा उत्कीर्णन धन्यवाद पूर्ण कैद मा राखिएको फाल्ने र आफ्नो हात बाहिर पर्ची छैन। उहाँले धेरै Ergonomic र प्रयोगकर्ता-अनुकूल थियो।
"ततैया" हालने चक्कु। यो मोडेल एक जानिन्छ सैन्य हतियार, विशेष सेवाहरू लागि निर्मित। "OSA" छोटो दूरी मा फालिएको लागि निमित्त र नजिक लडाई मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ थप साँघुरो (को ब्लेड को मोटाई 2.4 मिमी छ) छ, र फालिएको नागरिकहरु लगाउन एक परिमार्जन छ, तर रूस मा यो एक चक्कु प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
Antitank राइफल: इतिहास र विकास
हामी नासपाती ड्राइभिङ दायरा बनाउन सक्छ के बाट?
शिकार चक्कु तह: कसरी चयन गर्ने? शिकार उपकरण
एटीवी लागि ब्लेड - विशेष डिजाइन, निर्माण सामाग्री, निर्माता
शुल्क, आफ्नो सुविधा र विकल्प अभ्यास गर्न तकिया बल
सेलुलर polycarbonate - अद्वितीय आधुनिक सामाग्री, को farmlands मा बेबदल
B5 (भिटामिन): प्रयोगको लागि निर्देशन, को विवरण
डा लिसा Glinka: जीवनी, काम, परिवार
पाक बिना क्रिम चिज संग क्लासिक cheesecake
किया सोल: समीक्षा र सुविधाहरू
लेखांकन रिपोर्टिंग को चित्रण को टेक्नोलॉजीज। रिपोर्टिंग को मूल सिद्धान्तहरु
विकास को कृत्रिम सिद्धान्त
को जीवमण्डल Name मा पदार्थ को परिसंचरण
अभिनेत्री मारिया लियोनिवा। अभिनेत्री, चलचित्र चलचित्र, परिवारको जीवनी
सबै भन्दा राम्रो रडार डिटेक्टरों के हुन्? तीन चयन मापदण्ड
कसरी चक्कु पुतली मोड गर्न - सुझावहरू